ऋणले सतायो, कसरी पाउने मुक्ति ? पुरा पढ्नुहोस् - ramechhapkhabar.com
ऋणले सतायो, कसरी पाउने मुक्ति ? पुरा पढ्नुहोस्
मानिसालाई सबैभन्दा सताउने एउटै कुरा छ त्यो हो ऋण । सामान्य काम होस् वा ठुला काम गर्न मानिसलाई ऋणको आवश्यकता पर्दछ । यसरी ऋण लिदा लिदा र समयमा चुक्ता नगर्दा मानिस ठुलै समस्यामा पर्ने गर्छ । जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा ऋणको दोष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसक्दा निकै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ।
ज्योतिषका अनुसार कुण्डलीमा षष्ठम, अष्टम र द्वादश भाव ऋणसँग सम्बन्धीत हुन्छन्। त्यसलाई मंगल ग्रहको कारक मानिन्छ। मंगह कमजोर हुँदा वा पापग्रहसँग सम्बन्धीत हुने हुँदा अष्ठम, द्वादश, षष्ठम भावमा अशुव हुने हुँदा व्यक्ति ऋणी बन्ने गर्दछ। यदी यी भाव र मंगलसँग शुभ ग्रहको दृष्टी पर्दा ऋण हुन्छ तर त्यसबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
ध्यान दिनुहोस् मंगलबार र बुधबार धन लेनदेनसँग सम्बन्धीत काम कहिलै गर्न हुँदैन्। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शनिबार ऋणमुक्तेश्वर महादेवको पुजा गर्ने गर्दा ऋणमा कमी आउँछ । त्यस्तै मंगलबाट पुजा, दान तथा होम गर्ने र जप गर्नुपर्छ । मंगलबार र बुधबार ऋण लिने दिने काम नगरेकै राम्रो । ऋण लिदाँ वा दिदाँ रातो र सेतो बस्त्रको प्रयोग गर्ने ।
प्रत्येक दिन श्रीगणेशको पुजा आराधना गर्दा दिएको पैसा उठ्छ भने ऋणीले पनि तिर्ने ज्योतिषहरु बताउँछन् । बुधबार श्रीगणेशको अथर्वशीर्ष पाठ गर्दा पनि फलदायी हुन्छ । शिवलिंगमाथि प्रत्येक दिन दुध चढाउने गर्नुहोस् ।
आज वास्तुशास्त्रमा जान्नुहोस् पूर्व र पश्चिम दिशामा टाउको राखेर सुत्ने बारे। वास्तुशास्त्रका अनुसार पूर्व दिशामा टाउको राखेर सुत्नु राम्रो हुन्छ भने पश्चिममा टाउको राखेर सुत्नु हुँदैन ।
पूर्वमा टाउको राखेर अर्थात् पश्चिम दिशामा खुट्टा राखेर सुत्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । किनभने सूर्य पूर्व दिशाबाट निस्कन्छ र यसको पहिलो किरण पूर्व दिशामा मात्र देखिन्छ। त्यसैले यस दिशामा टाउको राखेर सुत्दा बिहानको पहिलो किरण टाउकोमा आउँछ र नयाँ उर्जाको संचार हुन्छ । यस दिशामा खुट्टा राखेर सुत्दा दिमागमा उचित ऊर्जा पुग्दैन।